Hatramin'izao, efa fohy aho nandinika ny fanadihadiana tanteraka fahadisoana sehatra, izay mihitsy no foto-kevitra ny boky halavan'ny fitsaboana (Weisberg 2005; Groves et al. 2009) . Na dia feno sehatra ity, dia amin'ny ankapobeny mahatonga ny mpikaroka mba hamela avy lafin-javatra iray manan-danja: vidiny. Na vola, izay azo refesina amin'ny alalan'ny na fotoana na vola-kevitra dia mazava loatra ny akademika mpikaroka, dia tena tery izay tsy miraharaha any am-loza. Raha ny marina, ny antony tafatafa mpikaroka santionany ny olona fa tsy mponina dia ny hamonjy vola. Noho izany, vola no fototry ny dingana ny fanadihadiana fikarohana (Groves 2004) . Ny tokan-tena-tsaina fanoloran-tena ny manamaivana fahadisoana raha tsy miraharaha tanteraka ny vola lany dia tsy foana ao amin'ny tombontsoa tsara indrindra.
Ny famerana ny iray mieritreritra be momba ny fampihenana ny fahadisoana dia aseho amin'ny alalan'ny fianarana ny Scott nanan-tantara sy ny mpiara-miasa aminy Keeter (2000) teo ny vokatry ny asa an-tsaha lafo vidy mba hampihenana ny tsy valiny an-telefaonina fanadihadiana. Keeter sy ny mpiara-miasa roa niara nihazakazaka fanadihadiana, ny iray mampiasa "Standard" dingana sy iray mampiasa "henjana" fomba fiasan'ny. Na dia ny "henjana" fomba fiasan'ny no mamokatra ny ambany tahan'ny tsy valinteny, vinavinan'ny avy amin'ny santionany roa Raha jerena ankapobeny dia toy izany koa. Na izany aza, ny "henjana" mitovitovy fomba vidin'izany avo roa heny ka naka 8 heny raha mbola. Moa ve isika tsara kokoa eny amin'ny 2 antonony fanadihadiana na 1 madio mangalahala fanadihadiana? Ahoana ny 10 antonony fanadihadiana na 1 madio mangalahala fanadihadiana? Ahoana ny 100 ny antonony fanadihadiana na 1 madio mangalahala fanadihadiana? Amin'ny fotoana iray dia tsy maintsy lany mahatsara dia mavesatra noho ny manjavozavo, tsy olana manokana momba ny kalitao.
Maro ny fahafahana namorona ny nomerika taona dia tsy mikasika ny famoronana vinavina izay mazava ho azy fa manana fahadisoana ambany. Kosa, ireo fahafahana ireo momba ny famoronana vinavina mora sy haingana kokoa, fa angamba fahadisoana izay ambony kokoa na mafy kokoa amin'izao fotoana izao mba handrefy. Rehefa mety ho ohatra ato amin'ity fizarana ity dia hampiseho, mpikaroka izay mikiry tokana saina mieritreritra be momba ny manamaivana fahadisoana amin'ny lany ny lafiny hafa ny kalitao no handeha ho verivery fotsiny ny fotoana mampientam-po. Noho izany fototra momba ny tanteraka fanadihadiana fahadisoana sehatra isika, dia izao hitodika amin'ny telo lehibe faritra fahatelo vanim-potoana ny fanadihadiana fikarohana: vaovao fomba ny solontena (sampana 3.4), vaovao fomba mba fandrefesana (sampana 3.5), ary ny vaovao tetikady ho natambatra fanadihadiana amin'ny nomerika soritra (sampana 3.6).